MAHAFINY Seabird seeker SB7L-360A Serie 2 FSX & P3D - Freeware
Seabird Seeker SB7L-360A Series 2 FSX & P3D
Ahitana feno gauges napetraka ny tany am-boalohany, tena tsipiriany photorealistic 2D cockpit, ny asany tanteraka VC sy dimy loko tetika. Flight fihetsehana dia miavaka marina ary manao ny fiaramanidina ho homem-manidina. Misy feno boky hetsika tafiditra ao ny toa voron-dranomasina mpikatsaka SB7L Documentation fampirimana.
Ny mpikatsaka toa voron-dranomasina dia fahazavana fandinihana fiaramanidina naorin'i toa voron-dranomasina Aviation Aostralia Pty Ltd ao Aostralia sy toa voron-dranomasina Aviation Jordana. Ny orinasa tsena ny fiaramanidina ho toy ny vidiny ambany ny fanaraha-maso hafa angidimby, ny miaramila sy ny sivily sehatra. Anjara asa izay ny orinasa tsena ny fiaramanidina ahitana ny fantsona ho an'ny maso, morontsiraka fiambenana, tontolo iainana andraikitra, avy eny ambony sary sy ny filaminana. Ny fiaramanidina no Powered by iray Lycoming O-360 maotera.
Ny mpikatsaka toa voron-dranomasina dia nanana fanondranana fahombiazana, ary dia niasa ny vaovao (lahatsoratra 2003 fananiham-bohitra) Iraqi Air Force.
Downloads 13 187
Noforonina 30 Mar 2012
Nohavaozina taminy 23 Aug 2019